Ubulumko ObuseBhayibhileni Buyakhusela
“Intlawulelo yomphefumlo womntu bubutyebi bakhe, kodwa osweleyo akeva kukhalinyelwa [akakho sichengeni].”—IMIZEKELISO 13:8.
NAKUBA ukuba sisityebi kukhe kube luncedo, kusenokuzisa neshwangusha, ingakumbi kweli xesha siphila kulo. (2 Timoti 3:1-5) Kwamanye amazwe abantu abazizityebi, nabakhenkethi ababonakala befumile baba ngamaxhoba amasela nokuxhwilwa kuze kufuneke bakhululwe ngemali.
Elinye ijelo leendaba lithi ngelizwe elithile elisakhasayo: “Ukuphangwa ngendlela ekhohlakeleyo, urhwaphilizo, ukuxhwilwa kwenza izityebi namahlwempu iintshaba. Iindawo zokutyela ziba noomantshingilane abaxhobileyo; yona imizi yezityebi ibiyelwa ngamacingo ahlabayo, ibenezibane zaphandle ezikhanyisa kakhulu, iikhamera kunye noomantshingilane.” Namanye amazwe amaninzi anayo le ngxaki.
Kodwa iBhayibhile ithi ngamahlwempu, “osweleyo akeva kukhalinyelwa [akakho sichengeni].” Singafunda ntoni kula mazwi obulumko? Ukuba uhlala kwindawo edume ngolwaphulo-mthetho nobundlobongela, okanye kufuneka uhambe kwindawo enjalo, musa ukuzibizela amehlo ngokubonakala njengomntu onemali. Zicebe kakuhle izinto ozinxiba okanye oziphatha phakathi kwabantu, ingakumbi ukuba ezo zinto zibiza amehlo. IMizekeliso 22:3 ithi: “Onobuqili ubona intlekele azifihle, kodwa abangenamava bayadlula baze bafumane isohlwayo.”
Ubulumko esibufumana eBhayibhileni busibonisa indlela uMdali wethu asikhathalele ngayo. Ufuna sikhuseleke. INtshumayeli 7:12 ithi: “Ubulumko bubagcina bephila abo banabo.”
Khawuve ukuba iBhayibhile ithini xa izithethelela.
Ubulumko bokwenene buza kuzicombulula iingxaki zabantu.